अन्तत सरस्वतीको शव नारायणी नदीमा भेटियो, श्रीमान पुगे थुनामा (भिडियो) - Nepali in Australia
February 1, 2021 EditorLeaveaComment on अन्तत सरस्वतीको शव नारायणी नदीमा भेटियो, श्रीमान पुगे थुनामा (भिडियो)
चितवन । चितवनमा फेरी एक पटक अर्को घटना घटेको छ । जुन घटना यतिबेला हाम्रो समाजमा प्राय घटि रहेकै पाउँछौं । यो वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा श्रीमान विदेश गएको र श्रीमानले कमाएको पैसालाई नेपालमा बसेकी श्रीमतीले हि’नामि’ना गरेको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा धेरै घटनाहरु घटिरहेका छन् ।
यो तीनै घटना मध्यको एक हो । बाक्ष्लुंग घर भएका कुल प्रसाद उपाध्याय पौडेलकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले श्रीमानको माटो रकम हि’नामि’ना गरिदिएपछि श्रीमानले आफ्ना कुरा मिडियामा राखेका थिए।
आफ्नै श्रीमतीले आफ्नै कमाई खाँदा पनि कसरी हि’नामि’ना भयो भनेर आ’रोप लगाउन सकेको होला भन्ने प्रश्न त छंदै छ । साथै उनको श्रीमतीको लुगा र चप्पल जब नारायणी नदीमा भेटियो तब भने घटनाले अर्को मोड लियो । श्रीमान कुल प्रसादको भनाई अनुसार उनले विदेशमा कमाएको ५ लाख रकमलाई श्रीमतीले हि’नामि’ना पारेकी छन् । के श्रीमानको कमाई देखाउनु पर्छ भनेर होला त ? उनको श्रीमतीले नारायणी नदीको तिरमा आफ्नो लुगा र चप्पल फ्याँ’केर श्रीमानलाई भ्रममा पार्न खोजेको भन्ने समाचार यो भन्दा अगाडी बाहिरिएका थिए ।
आफ्नै श्रीमतीसंग कुल प्रसादले किन हिसाब खोजे त भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ । उनले श्रीमती सरस्वतीलाई गैडाकोटमा डेरा गरी राखेका थिए । उनीहरुको दुई सन्तान पनि छन् । श्रीमानको भनाई अनुसार मैले कमाएको पैसा काहाँ प्रयोग भएको रहेछ भनेर आफुले जान्न मात्र खोजेको बताउँछन् । तर मैले हिसाब खोजें भन्दैमा घर नै छा’ड्नु पर्ने त केही थिएन होला नी ? भन्दै कुल प्रसाद प्रश्न गर्छन् । यतिबेला सरस्वतीको लुगा र चप्पल नारायणी नदीमा भेटिएपछि प्रहरी र आफन्तहरुले सरस्वतीले नारायणीमा हा’म फालेको आ’शंका गरेका थिए ।
उनीहरुले गरेको आशंका अहिले यथार्थमा बदलिएको छ । उनको शव नारायणी नदीमा शव भेटिएको छ । उनको शव भेटीए पछि पो’स्टमार्टम गरि दा’हसं’स्कार गरिएको आफन्तले जनाएका छन् । उनका श्रीमानलाइ भने प्रहरीले निगरानीमा राखेको आफन्तले बताएका छन् । उनि प्रहरीकै सम्रक्षणमा छन् आवस्यक कारवाही गर्नु परे प्रहरीले गर्छ हामीले प्रहरीमाथि बिश्वास गरेका आफन्तले भनेका छन् । कानुनले जो दोषी छ पनि सजाए दिनुपर्छ ।
केहि दिन अघि एक मिडियाको कुराकानीमा जेठानीको भनाई अनुसार सरस्वतीको च’रित्र ठिक थिएन । उनी पहिलादेखि नै खराब बानी र व्यवहार देखाउँदै आई रहेको कुरा उनकी जेठानीले बताएकी छन् ।